Zlọ ahịa AZEXO, Okwu WordPress maka Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Zlọ ahịa AZEXO, Okwu WordPress dị maka Ecommerce
Mgbe ị nwere azụmahịa e-commerce, ọdịdị bụ akụkụ bụ isi nke na-enyere aka wulite ntụkwasị obi n'etiti ndị nwere ike ịzụta gị. N'ezie, ọ bụghị ihe niile, ebe ị na-achọkwa arụmọrụ zuru oke na atụmatụ iji kwado usoro ịzụta ma melite ahụmịhe ndị ahịa. Isiokwu maka Ecommerce dị ka AZEXO Shop na-enye gị ihe ndị a niile iji gboo mkpa nke azụmahịa Ecommerce gị.
AZEXO Shop - Okwu Ecommerce
Nke a bụ isiokwu maka ụlọ ahịa elektrọnik nke na-apụ apụ gụnyere ton nke atụmatụ ndị echebere jirichaa ahụmahụ Ecommerce. N'ezie, ọ bụ isiokwu ezubere ka ị nwee ike ịmepụta saịtị dị iche iche n'ụzọ ga-eme ka ị nwee ụlọ ahịa azụmaahịa kwa ụbọchị, saịtị ịzụ ahịa otu, ụlọ ahịa mara mma nke nwere ngwaahịa anụ ahụ, ụlọ ahịa yana mmemme mmekọ ma ọ bụ mpụga Younwere ike ịmepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị yana ngwaahịa dijitalụ iji budata.
Ọbụghị naanị nke a, nke a bụ isiokwu eCommerce nke na-abịa na a akwụkwọ onyinye na WooCommerce Vouchers Plugin. Akụkụ ọzọ iji gosipụta na ọ bụ Okwu WordPress maka Ecommerce nke bụ ukwuu customizable, otú i nwere ike hazie nkụnye eji isi mee, n'okpuru, tinyere sidebars.
Ọ gụnyekwara a nrubeisi site na CMB2 API, tinyekwara ọrụ ọchụchọ na-ahazi nke na-enye ndị na-azụ ahịa ohere iji nzacha ịchọta ngwaahịa ha na-achọ ngwa ngwa. Tinyere nke a, isiokwu ahụ nwere ndebiri ihe ndebiri na ibe ndepụta na ibe ibe.
Okwu a Ecommerce maka WordPress Ọ na-abịa n'ọhịa a haziri ahazi, ụdị ndepụta ndị akọwapụtara, nkwado ọtụtụ saịtị, ngagharị na-enweghị ngwụcha, nkwado maka Maapụ Google, iyo maka ebe dị anya na geolocation. Okwesiri ighota na nke a bu isiokwu di elu nke enwere ike zuta maka $ 59 ma o doro anya na o bu ezigbo nhọrọ iji meputa ulo oru intaneti nwere ihe di egwu na nke okacha mara nma, ya na oru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Zlọ ahịa AZEXO, Okwu WordPress dị maka Ecommerce
Kedu ihe bụ outsourcing na kedụ uru ọ bara maka Ecommerce?